नेपालमै थालियो क्यान्सरको औषधि उत्पादन – Health Post Nepal
नेपालमै थालियो क्यान्सरको औषधि उत्पादन
२०७८ फागुन ५ गते ११:३०
काठमाडौं – नेपालमै पहिलो पटक क्यान्सरविरुद्धको औषधि बिक्री-वितरण सुरु भएको छ। टिजिग फर्माले उत्पादन गरेको क्यान्सरविरुद्धको औषधि बिक्री-वितरण गर्न थालिएको हो। टिजिगका कार्यकारी निर्देशक शैलेश वैद्यले नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि आफूहरूले क्यान्सरको औषधि पहिलोपटक उत्पादन गरेर बिक्री-वितरण सुरु गरेको जानकारी दिए।
टिजिग क्यान्सर रोगविरुद्धको औषधि उत्पादन गर्ने नेपालकै पहिलो कम्पनी बनेको छ। कम्पनीको उद्योग काभ्रेको बनेपामा रहेको छ। भारतको हैदरवादमा रहेको एसपी एक्युर ल्याब (एसपिएएल) सँग प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता गरेर कम्पनीले क्यान्सरविरुद्धको औषधि उत्पादन गरेको हो।
कार्यकारी निर्देशक वैद्यले अहिले बजारमा ट्याब्लेट र क्याप्सुलको औषधि उत्पादन गरिएको बताए। उनले खोप (इन्जेक्सन) मा आधारित औषधि पनि चाँडै नै बनाउने योजना रहेको जानकारी दिए। कम्पनीले अहिले नेपालभित्रै बिक्री-वितरण गर्न औषधि व्यवस्था विभागबाट तीनवटा मोलिक्युलको मार्केट लाइसेन्स प्राप्त भइसकेको छ।
‘अहिले हामी मुखबाट खान मिल्ने औषधि अर्थात् ट्याबलेट र क्याप्सुल बनोटमा पठाएका छौं। खोप (इन्जेक्सन) पनि उत्पादन गर्ने तयारीमा रहेका छौं’, उनले भने। कार्यकारी निर्देशक वैद्यले आफूले उत्पादन गरेको औषधि विदेशबाट आएकोभन्दा सस्तो हुने बताए।
‘हामीले उत्पादन गरेका औषधि यसअघिसम्म नेपाली बिरामीले विदेशबाटै ल्याएर खानुपर्ने बाध्यता थियो, अब त्यो बाध्यता हट्नेछ’, उनले भने, ‘उही औषधि नेपालमै उत्पादन हुँदा हामीले बिरामीलाई केही सहुलियत दरमा दिनेछौं।’
उनले नेपालमै उत्पादन हुने भएपछि औषधिको अभाव पनि नहुने बताए। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णुदत्त पौडेलले क्यान्सर रोगविरुद्धको औषधि नेपालमै उत्पादन हुनु राम्रो भएको भन्दै औषधिको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. मदन पियाले नेपालमा नै क्यान्सर रोगविरुद्धको औषधि उत्पादन हुनु सबैका लागि खुसीको कुरा रहेको र औषधि स्वदेशी नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष प्रज्वलजंग पाण्डेले स्वदेशमै जुनसुकै औषधि बन्छ र बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पछिल्लो पटक क्यान्सरको औषधि उत्पादन हुनुले प्रमाणित भएको बताए।
उनले नेपालमा क्यान्सरजस्तै अरु औषधि उत्पादन गरेर मुलुकलाई औषधिमा आत्मनिर्भरता बनाउनुपर्ने बताए। औषधि व्यवस्था विभागका सन्तोष केसीले उत्पादन भएको औषधिको गुणस्तरमा ध्यान दिन आग्रह गरे।